Dɛn na Ɛbɛyi Ohia Afi Hɔ? Ahiafo Ani Bɛgye Da Bi? | Nea Bible Ka
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Nnipa ayɛ nea wɔbɛtumi biara sɛ wɔbɛtu ohia ase, nanso ohia da so ara dokoro amanfoɔ.
Ahiafo bɛyɛ dɛn na wɔn ani agye?
Nnipa pii susu sɛ sɛ obi bɛnya anigye ne akomatɔyam a, ɛnneɛ ɛsɛ sɛ ɔnya asetenam nneɛma bebree. Bio nso sika na ɛma obi yɛ ɔmamma. Esiane sɛ ebinom ntumi nkɔ sukuu anaa wɔnnya ayaresa ne asetenam nneɛma a ɛfata nti, daa na wɔte wɔn hia mu. Nnipa susu sɛ saafo no ne anigye ntam kwan ware paa.
Onyankopɔn Asɛm ma yɛhu sɛ ɛnyɛ asetenam nneɛma a obi wɔ na ɛma n’ani gye, na mmom ɔsom a ɔde ma Onyankopɔn. Bible ka sɛ: “Anigyeɛ ne wɔn a wɔnim wɔn honhom mu ahiadeɛ.” (Mateo 5:3) Sɛ Onyankopɔn asɛm ho hia obi a, ɔbɛbɔ mmɔden sɛ ɔbɛsua Bible ahu Onyankopɔn adwene wɔ nneɛma ho. Wei na ɛma ne koma tɔ ne yam, na ɛnyɛ honam fam nneɛma a ɔwɔ. Enti sɛ obi pɛ anigye ankasa a, ɔrentumi nkɔ nnya Onyankopɔn som.
Sɛ obi bɔ mmɔden sua Bible na ɔde emu afotuo yɛ adwuma a, ɛboa ma n’asetena tu mpɔn. Nhwɛso ni: Bible boa ma nkurɔfo twe wɔn ho fi tawanom ne nsaweɛ ho. Nneɛma a ɛtete saa sɛe sika. Ɛtɔ da mpo a na akɔfa yareɛ bi aba ma wɔredi ayaresabea akɔneaba retotɔ nnuru. Wei nyinaa gye sika.—Mmebusɛm 20:1; 2 Korintofoɔ 7:1.
Bio nso Bible bɔ yɛn kɔkɔ wɔ anibere ne adifudepɛ ho. (Marko 4:19; Efesofoɔ 5:3) Sɛ obi tie afotuo yi a, ɔrensɛe sika wɔ kyakyato ho na ɔrenyɛ “sikanibereɛ,” efisɛ Bible ka sɛ “sikanibereɛ yɛ bɔne nyinaa nhini.” (1 Timoteo 6:10) Kyerɛwnsɛm no se: “Sɛ onipa nya ma no bu so mpo a, ɛnyɛ nneɛma a ɔwɔ no mu na ne nkwa fire.” (Luka 12:15) Nea wei nyinaa kyerɛ ne sɛ, obi wɔ sika sɛ dɛn mpo a, ɔrentumi ntɔ nkwa. Nanso sɛ obi de Bible afotuo bɔ ne bra a, ɔnya akomatɔyam na n’ani gye ankasa.
Ɛwom, ahiafo brɛ ansa na wɔanya nea wɔbɛdi, nea wɔbɛhyɛ, ne baabi a wɔde wɔn ti bɛto, nanso sɛ wɔma wɔn ani sɔ nea wɔwɔ, na wɔyɛ Onyankopɔn apɛde a, wɔn ani bɛgye paa. Wɔbɛhu sɛ asɛm a Bible ka yi yɛ nokware: “Yehowa nhyira—ɛno na ɛma onipa yɛ ɔdefoɔ, na ɔmfa yea biara nka ho.”—Mmebusɛm 10:22.
KYERƐWNSƐM TITIRIW: “Anigyeɛ ne wɔn a wɔnim wɔn honhom mu ahiadeɛ.”—Mateo 5:3.
Enti ohia bɛfi hɔ da bi?
Nnipa ayɛ ara sɛ wɔbɛtu ohia ase, nanso ɛnkɔsii baabiara. Adeɛ yi pɛsɛmenkomenya adidi nnipa ne wɔn aban nyinaa mu, na wei ne ade titiriw a ɛma nnipa pii di hia. (Ɔsɛnkafoɔ 8:9) Nanso Onyankopɔn bɛtu ɔhaw no ase koraa. Yɛn Bɔfo no bɛsɛe aban ahorow no na ɔde foforo asi anan. N’Ahenni anaa aban a ɛwɔ soro no bɛma nnipa a wɔte asase so nyinaa anya nea wɔpɛ; ɔrenyɛ nyiyi mu. Bible ka no pen sɛ Ɔhene a ɔdi Onyankopɔn Ahenni so no bɛhu ahiafo mmɔbɔ na wama wɔn nea wɔhia. ‘Ɔbɛgye hiani a ɔsu frɛ no, na ɔbrɛfoɔ ne ohiani asɛm bɛyɛ no mmɔbɔ, na ɔbɛgye ahiafoɔ kra nkwa.’—Dwom 72:12-14.
Asase nyinaa bɛdane paradise, na adan ne aduane bɛbu so ama obiara anya bi. Ohia mpo deɛ wɔremmɔ din. Onyankopɔn asɛm a ɛwɔ Yesia nwoma no mu se ne nkurɔfo ‘bɛsisi adan atena mu na wɔayeyɛ bobe nturo adi mu aba. Na wɔn a mayi wɔn no bɛdi wɔn nsa ano adwuma amee.’ (Yesaia 65:21, 22) Enti obiara renwɔbere ne ho ansa na ne nsa akɔ n’ano. Mmom, Yehowa bɛma obiara anya nnepa adi amee. Nokwasɛm ne sɛ ɔde “sradeduane” bɛto wɔn pon.—Yesaia 25:6.
ADƐN NTI NA ƐHIA SƐ YƐHU?
Yɛahu sɛ Onyankopɔn ahyɛ bɔ sɛ ɛrenkyɛ ɔbɛyi ohia afi hɔ. Sɛ yɛma asɛm yi tena yɛn adwenem a, ɛbɛma yɛahu sɛ Onyankopɔn dwene ahiafo ho. Anidaso yi bɛtumi ahyɛ obiara den ma wagyina wiase yi mu haw ano.
KYERƐWNSƐM TITIRIW: ‘Ɔbɛgye hiani a ɔsu frɛ no, na ɔbrɛfoɔ ne ohiani asɛm bɛyɛ no mmɔbɔ, na ɔbɛgye ahiafoɔ kra nkwa.’—Dwom 72:12, 13.
Nea Bible Ka Fa Ohia Ho
Nea Bible Ka Fa Onyankopɔn Din Ho